Tiraampi moobayilootni Huwaawee applikeeshinoota kuusaa 'Google' akka hin fayyadamne dhorkan - BBC News Afaan Oromoo
Kaampaaniin Guugil kaampaanii addunyaa irraa moobaayiloota Ismaartifoonii [smartphones] oomishuun sadarkaa lamaffaa irra jiru, Huwaawee [Huawei], appilikeeshinoota kuusaa guugil [Google] akka hin fayyadamne dhorkuuf.
Moobaayiloonni Huwaawee siistema Andirooyidii akka hin fayyadamneef mootummaan Ameerikaa kaampanota dhorkaman keessatti galmeesseera.
Kun waldhabdee daladalaa Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti uumameen boodadha. Kana irraa kan ka'e moobaayilonni haaraan Huwaween hojjete appilikeeshinoota Guugil [google app] dhabuu danda'u.
Tiraampi Ameerikaan eeyyama malee kaampanota kanneen waliin daldaluu akka hin barbaanne himaniiru. Kaampaaniin Guugil [Google] ammoo akkaataa ajaja darbeen hojjechuun bu'aa isaa ilaaluudha jedhe.
Kaampaaniin Huwaaween garuu dhimma kana irratti hanga ammaatti deebii hin kennine.
Waraanni daldalaa Ameerikaan gaggeessaa jirtu Addunyaa hiyyummaatti dhidhimsa
Warri moobayila Huwaawee amma harkaa qaban sooftiweerotas tahe appilikeeshinoota baarbaadan jijjiruus tahe haaressachuu danda'u. Haa tahu malee waggaa kana yeroo Guugil Google] Andirooyidii haaraa fooyyessee baasu argachuu hin danda'an.
Isaan keessaa kanneen akka Yuutuubii [Youtube] fi kaartaa [Maps] argachuu hin danda'an. Moobayilootni Huwaawee [Huawie] haaraa hojjetaman appilikeeshinoota kuusaa guugil [Google play] argachuu waan hin dandeenyeef rakkoof saaxilamuu danda'u.
Tiraampi eeyyama mootummaa malee kaampanotni Chaayinaa akka Huwaawee [Huawie] teeknloojii tokko iyyuu fayyadamuu hin qaban jechuun galmee isaanii adda baase.
Hojii gaggeessaa ol aanaan kaampaanii Huwaawee[ Huawie] Ren Zhengfii miidiyaa Jaappaan tokkotti akka himetti kanaaf dursinee qophaa'aa turreerra jedhan.
Kaampaaniin isaanii waggaatti qaamolee teeknoloojii garaagaraa $67bn baasu Ameerikaa irraa bitaa tureera, akka gaazexaan Niikii jedhamu gabaasetti. Kanaaf ammoo kan dhuunfaa isaanii ijaaruufi oomishuuf qophaa'uu hin hafan jedha.
Ameerikaan Huawei irratti himata bante
Tiraampi dhimma Kooriyaa Kaabaa irratti Chaayinaa akeekkachiisan
Biyyoota Lixaa irraa dhiibbaan mudataa kan jiru Huwaawee [Huawie] Chaayinaan basaasaaf itti fayyadamaa turte jedhama. Ta'us kaampaanichi maqa-balleessiidha jechuun haaleera.
Biyyootni tokko tokko kaampanotni Teeleekomii isaanii neetwoorkii 5G akka hin fayyadamne dhorkaa jiru. Kun yeroo muraasaaf kaampanicha miidhuu mala kan jedhan xiinxaltootni bizinasii Huwaaween garuu kuusaa applikeeshinoota mataa isaa hojjechuu danda'a jedhan.
Kaampaanichis xumuraa akka jiru ibsuun dhimmi isaanii dhimma mootummaa Chaayinaa irraa adda bahee ilaalmuu akka qabu himaniiru.
Waraanni daldalaa Ameerikaan gaggeessaa jirtu Addunyaa hiyyummaatti dhidhimsa.
Ameerikaa - Chaayinaa: Ameerikaan dhaabbata Huawei irratti himata bante